ORCHID LUDIZIYA: SABABTA LOO YAQAAN 'HEMARIUM' AYAA LOOGU YEERAA QAALI AH, SIDA LOO DARYEELO UBAXA GURIGA, SIDEE AYUU GEEDKA U EGYAHAY SAWIR? - SOOSAARKA DALAGGA
Ubax leh caleemo qaali ah - orchid Ludiziya
Ludysia waa warshad xiiso leh oo matnaata Orchids genus. Ciriiri ee ubaxyo yar yar, kuwaas oo u eg luul oo muuqaal ah. Caleemaha waaweyn waxaa ku jira qaabab qurux badan oo la mid ah labiska.
Dhaqanka daryeelka ayaa dalbanaya, laakiin wax cusub ma jiraan. Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero waraabinta, dooro meesha saxda ah iyo daaweynta ka hortag ah ee cayayaanka halista ah, iyo sidoo kale cudurrada.
Waa maxay warshadani?
Ludysia Orchid waa dhirta ornamental, oo loo yaqaan 'satellite'.. Orchidku wuxuu ku koraa dhulka ama derbiyada godadka daboolay dharka.
Ubax wuxuu leeyahay wada jir gaaban, laakiin waa mid si fiican u jilicsan. Waxay kobcinaysaa helitaanka nafaqooyinka iyo hagaajinta dhirta ku taalla dusha sare ama dusha sare.
Ludysia Orchid waxaa lagu qalabeeyaa dabeecad xoogan oo xoog leh leh rosettes of caleemo sessile.. Heerka dhirtu waxay gaartay ilaa 15 cm, dhanka kale, ubaxa si firfircoon ayaa loo sii deynayaa geeddi-socodka marxaladaha, taas oo ay ugu wacan tahay taas oo ku faafta qulqulka.
Caleemaha ayaa si ba'an loogu habeeyaa, waa oval ama oveid, iyo talooyinkooda ayaa lagu tilmaamay. Qiyaastii 5 caleemood ayaa laga sameeyay hal jumlada. Dhererka xaashida xaashida waa 7 cm, ballaadhkuna wuxuu yahay 4 cm, waxaa jira qaabab qurux badan oo dusha sare ah ee xaashida, iyo dusha sare ee laftiisu waa siman yahay. Midabkiisu waa cagaar.
Digniin: Ubaxa ludizii yaryar, sidaa darteed ha u keenin xamaasad badan. Rosette caleen kasta waxay soo saartaa baraha tooska ah, dhererkoodu waa 25 cm, waxaa lagu daboolaa ubaxyo badan oo caan ah, kuwaas oo ilaa 2 cm dhexdhexaad ah, tufaaxuna waxay ku wareegsan yihiin caddaan, iyo stamens huruud ah ayaa lagu soo ururiyaa bartamaha.
Halkee ayuu ku koraa dabeecadda?
Marka la eego xaaladaha dabiiciga ah, hemaria ayaa ku kora kaymaha roobka ee Bariga iyo Bartamaha Aasiya.. Hadda warshadan waxaa laga arki karaa New Zealand, New Guinea iyo xitaa Russia.
Waa maxay udambeysiga uurjiifka?
Ludysia waxay si isbarbardhig leh ula noocyada kale ee orchids iyadoo joogitaanka silsilad jilcan iyo caleemo daboolaya qaababka lacagta. Waxaa loogu talagalay qaabka xeeladda ee caleemaha ka baxa loo yaqaan 'orchids'.
Qeexida noocyada sawiro leh
Ludisia waxaa lagu matala noocyo kala duwan iyo noocyo kala duwan.. Ka hadal iyaga hoose.
Warshad waxaa lagu kala saaraa stem stinging stem. Rootiga Radicalka waxaa ka mid ah caleemo madow oo cagaaran, kuwaas oo lagu daboolay xididada dhaadheer. Orchid wuxuu koraa 3-6 caleemo waqti. Peduncle kuri, dhererkeedu waa 10-120 cm, daboolay ubaxyo badan oo yar yar.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sifooyinka Ludizia Discolor:
Heerka dhirta waxaa la gaari karaa 30 cm. Caleemaha waa weyn, qurxin leh dhar khafiif ah oo midab casaan ah. Dusha sare ee saxanka warqadda waa cufan, xiiso leh iyada oo midabkeedu yahay midabada.
In orchid this, xididdada silvery joogto ah on caleemaha abuuro qaab aan caadi ahayn.. Isku-duubka istiraatiijiga ah ee u dhexeeyaa dhererka dhererka dheriga dhexe.
Ubax Tani waxay leedahay midab khafiif ah oo caleenta ah, iyo xuduudaha cad oo ku yaala dusha sare ee caleen.
Caleenta waa cagaar mugdi ahna waxaa ku yaal xayndaab ama casaan.
Noocyada orchid waxay leeyihiin saxan caleen ah oo ballaaran.. Inta u dhaxaysa xididada dheeraadka ah waxaa ku jira mesh shimbir leh.
Caleemaha waa midabka cagaaran, dusha sare waa cufan. Qaybta sare ee xaashida waxaa lagu qurxiyay maro casaan dheer.
Goorma ayay dhacdaa?
Ludysia Blooms dayrta goor dambe - jiilaalka hore. Waa wakhtiga marka dhirta kale ee indoor-ka ah loo diro nasashada jiilaalka, orchid waxay bilaabaneysaa inay ku raaxeyso quruxda aan caadiga ahayn ee ubaxeeda. Muddadani waxay socotaa muddo bil ah.
Daryeelka waallida xilligan
Ka hor inta ubax, dhirta waa in la quudiyo leh xeryahooda macdanta, la soco qoyaanka ciidda si biyuhu ma galaan galay peduncles. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la xakameeyo in ciidda qoyanaa, laakiin aan la dhaafin.
Guddi: Ka dib markii ubax, waa lagama maarmaan in laga saaro dhammaan burooyinka yar yar, hoos u dhigo waraabinta, maadaama ay tahay wakhtiga dhirta in ay nasato.
Sidee loo kicin karaa nidaamka?
Si aad u kiciso ubax ludizia, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso heerkulka hawada.waa inuusan ka badnayn 29 digrii oo aan ka yarayn 20 digrii. Habeenkii, marka la barbardhigo heerkulka maalintii waa in uu ahaado 3-5 digrii.
Thanks to dhibcooyinkan, dhirta bilaabi doonaa beerto ubaxyo ubax. Marka maqaarku udheer yahay, waxay u baahan tahay inay qaboojiso heerkulka hawada waxay ahayd 18 digrii.
Tilmaamaha daryeelka guriga ee asaasiga ah
Doorashada meel. Ludysia waxay jecel yahiin inay soo baxaan hooska, laakiin waxay awoodaan inay u adkeeyaan raajada subaxa ama fiidka qorraxda. Xitaa haddii aad dhigto daaqadaha waqooyiga, waxay si fiican u kori doontaa oo horumarineysaa haddii aad bixiso caymis dheeraad ah.
Heerkulka. Heerkulka waa inuu si diiran u kululaado. Wixii Ludizia ah, heerkulka maalintii ee 20-23 digrii ayaa ku habboon, iyo heerkulka habeenkii - 17-19 digrii.
Qoyaan. Ludysia waxay koraan oo kobcisaa oo kaliya qolka qoyan ee qoyan. Si loo kordhiyo heerka qoyaanka, waxaad isticmaali kartaa hababka soo socda:
dhigay ubax meel u dhow ilax ama aquarium;
waqti ka waqti si aad u dhejiso digsi oo leh diirimaad iyo qumbaha;
Waa muhiim: Isku daadinta ludysia laguma talin, maaddaama dhuxushu ku sii jiri karto dusha sare ee caleemaha.
Nalalka. Orchid waxay ku fiicantahay nalka dabiiciga ah, laakiin muddada qoraxdu waa in aysan ka badnayn 12-14 saacadood. Haddii kale, afkoda ayaa noqon doona dhuuban.
Waraabinta. Qoyaanka ubaxu waa inuu noqdaa mid joogto ah sanadka oo idil. Carrabku waa inuu qoyan yahay, laakiin biyo ma joogsan. Dareemo dheeraad ah in laga daadiyo digsiga nus saac ka dib markaad waraabiso.
Dharka ugu sareeya. Bacriminta ludizii isticmaalaan Bacriminta adag ee orchids. Gaar ahaan waxay u baahan tahay nafaqo dheeraad ah dhirta inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon iyo ubax. Inta jeer ee la quudiyo iyo diyaarinta xalka ee diirada la rabo waxaa lagu muujiyaa baakada bacriminta loo isticmaalo. Inta badan tani waxay la dhacdaa waraabka 3aad ee kasta. Laguma talinayo in lagu quudiyo geedka oo dhan sanadka oo dhan. Ka dib markii ubax, ludysia wuxuu galaa nasasho nasasho, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad siisid orchids nasasho.
Waxaan ku talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan daryeelka ludizia:
Dhirta qaangaarka ah waa in lagu dhex daro weel yar oo hufan oo leh godad dheeri ah.. Qeybta hoose ayaa hubaal ah in la geliyo xabbad lebbiska ama vermiculite.
Sida ciidda, laakiin adiga keligaa ayaad samayn kartaa haddii aad qaadato qaybaha soo socda:
jilif geedeed la jajabiyey - 4 qaybood;
Sphagnum gabal fadhi - 4 qaybood;
dhuxusha, peat iyo caleen dhulka - 1 qayb.
Waxaad isticmaali kartaa walxaha ciidda la iibsaday ee loogu talagalay orchids.
Uteraria waa in la sameeyaa xilliga gu'ga, samee 2-3 sano kasta.. Raac nidaam qaas ah.
Ka hor inta aadan beerin, ku shub ubax maalinta oo dhan biyo diirran.
Si taxadar leh uga saari xididada iyo burooyinka dhulka iyo habka loo bedelayo dhirin kale. Qasnadda kelyaha maaha muhiim.
Muddo 3-4 maalmood ah, geli qolka qol leh iftiin kala firdhiya.
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan ludizii bedelka:
Ludysiya waxay u egtahay siyaabo kala duwan: iyada oo loo qaybinayo baadiyaha iyo dhagxaanta. Midda ugu fudud waa doorashada ugu horeysa, maaddaama aad u baahan tahay inaad qaybiso qaybta qaangaarka ee qaybaha, mid kasta oo ka mid ah waa inuu ku jiraa 2-3 habab. Jarjadu waxay u baahan tahay waqti dheeraad ah, laakiin heerka badbaadada ee geedo waa ka fiican guga iyo xagaaga.
Iska yaree qaybta sare ee asliga ah si uu u helo 2-3 knot iyo xididada aalkolada.
Daadi meesha la gooyey dhuxusha firfircoon ama qorfe.
Daboolida guntooda waa inay ku jirtaa dhuxul qoyan, oo ku dhajisa caleemaha abuurka dusha.
Si tartiib ah u jar jarjar galka qoyan, ma aha mid qoto dheer.
Sida ugu dhakhsaha badan xididada yar yar yihiin, geedka waxaa lagu beeray dheri.
Ludisia waxay ku dhici kartaa oo keliya xanuunka sababtoo ah daryeel aan habooneyn.. Haddii aad si joogto ah dib-u-qoyso ciidda, waxay u horseedi doontaa horumarinta kallana, iftiin dhalaalaya wuxuu keenayaa gubasho gubasho.
Sidoo kale khatarta ah ubaxa waa qaar ka mid ah cayayaanka-dulin.
Caarada caarada. Cayayaankaani wuxuu nuugayaa casiir ka soo socda orchid. Cunto yar oo aaney macquul ahayn in la ogaado cayayaanka. Waxa kaliya oo la aqoonsan karaa oo keliya sababta oo ah webka khafiifka ah ee daboolaya caleemaha ama asliga ah.
Shchitovka. Waa xayawaan jaqsiin ah oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo ku yaal saxan caleen ah oo ludisia ah. Aqoonsiga cayayaanka waxay ku dhici kartaa qolofka madow, kuwaas oo lagu dhajiyay caleemaha.
Mealybug. Tani cayayaankan geedka waxaa lagu arki karaa qaabka mashiinka cad, oo la mid ah suuf.
Waxaad kaydin kartaa orchid, haddii aad raacdo talooyinkan:
Calaamadee calaamadaha isla markaana si sax ah u go'aamiyaan sababta cudurkan loo yaqaan 'pathology'.
Kala sooc warshadda saameeya karantiilka.
Si aad u fuliso daaweyn adigoo isticmaalaya hab isku dhafan. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho daaweynta kiimikada oo kaliya, laakiin waa inaad isbedeshaa shuruudaha xabsiga.
Ubaxyo la mid ah
Noocyada soo socda ee geedaha waxay la mid yihiin Ludizia:
Parfipedilum. Warshadani waxay si firfircoon ugu koraan guryaha iyo guryaha, maadaama ay fududahay in la nadiifiyo. Iyadoo ludysia waxay u eg yihiin qaabka iyo midabka ubaxa.
Anecochilus. Warshad Tani waxay la mid tahay Ludise qaabka lacagta, taas oo flaunts on caleemaha. Ubaxa wuxuu u baahan yahay xaalad heerkulka dhexdhexaad ah iyo wax qabow oo qabow.
Heerostilis. Cudurkaan ee orchids wuxuu leeyahay 54 nooc. Iyadoo ludysia waxay u eg yihiin midabka aan caadiga ahayn ee madow ee caleemaha.
Florium. Warshadani waxay u egtahay ma aha oo kaliya caleemo cufan, laakiin sidoo kale ubax cad.
Mareeg Dossinia ah. Tani waa nooc ka mid ah Cudurka Dossinia, qoyska orchid. Waxay sidoo kale leeyihiin caleemo qoyan, on dusha sare ee qaababka silvery kala firdhiyey.
Ludysia waa nooca orchid ee lagu kala gooyay ubax yar yar iyo caleemo cufan. Daryeelka ubaxa waa in si taxaddar leh oo joogto ah loo eego, maadaama ay tani sii balaarin doonto muddada ubax iyo ka hortagga horumarka cudurka.